thai series – Categories – Alpha Premium
The Underclass ထိုင်းစီးရီးအသစ် လန်းလန်းလေး ကြည့်ရအောင်။ ကျောင်းသူလေးတွေက ချစ်စရာလေးတွေကြည့်ကြ။ အညွှန်းက ဒါပဲ။ အဲလို ရေးပြန်ရင်လည်း မကောင်းပါဘူးလေ။ ဇာတ်လမ်းက ထိုင်း ကျောင်းသူသီးသန့် ဘော်ဒါကျောင်းတစ်ခုထဲမှာ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ အဲဒီကျောင်းက မြန်မာက ကျောင်းတွေလိုပါပဲ။ အမှတ်နဲ့ အတန်းခွဲထားပါတယ်။ အတော်ဆုံးတွေက အေ၊ အညံ့ဆုံးတွေက အက်ဖ် ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘော်ဒါဆိုတော့ အေတန်း နဲ့ ဘီတန်း အက်ဖ်တန်းတွေက ရိုးရိုးမခွဲဘဲ ရပိုင်ခွင့်တွေပါ ခွဲလာပါတယ်။ အဆောင်အကောင်း အညံ့တွေ၊ အစားအသောက်ကအစ အကုန် ခွဲထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ အပြိုင်အဆိုင်တွေ ပြင်းထန်ပြီး ဖိအားတွေများကြတာပေါ့။ ဒါကိုမကျေနပ်တဲ့ အက်ဖ်တန်းက အပေအတေအဖွဲ့က ညဘက်တွေမှာ စူပါဟီးရိုးလို ရုပ်ဖျက်ပြီး တော်လှန်ကြတာပေါ့။ အဲဒီအဖွဲ့ထဲကို အေတန်းကနေ စာခိုးချလို့ အပြောင်းခံလိုက်ရတဲ့ စာကြမ်းပိုးမရောက်လာပြီး ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ ဆက်ကြည့်ကြတာပေါ့။ လူငယ်ဇာတ်လမ်း၊ ပညာရေးစနစ်မှားတွေကိုလှောင်ထားပြီး လှည့်ကွက်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ကြိုက်ကြမှာပါ
2gether: The Series Bromance ကိုမှ ရိုဆန်ဆန် သဘာဝဆန်ဆန် နဲ့ တအားမပိုတအားမလိုဘဲ မင်းသားချောချောလေးတွေကိုသဘောကျရင် ဒီ 2gether Series လေးကိုကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုက်ပါရစေ တိုင်း ဆိုတဲ့ဆော်ကြည်ဘဲလေးက တွဲသမျှကောင်မလေးတိုင်းနဲ့သူနဲ့အဆင်မပြေရှာပါဘူး ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖူးစာဖက်အမှန်မတွေ့သေးဘူးပေါ့ အဲ့တာနဲ့သူ့ဖူးစာဖက်ကိုတက္ကသိုလ်မှာတွေ့ရမယ်လို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ကျောင်းစစတက်ချင်းနေ့မှာပဲသူ့ခမျာကောင်မလေးလန်းလန်းတွေကသူ့ကိုစိတ်တောင်မဝင်စားဘဲ ဂရင်းဆိုတဲ့ ကောင်လေးကသူ့ကိုကြွေသွားပါလေရော… သူကတော့သဘောမကျကြောင်းငြင်းလေ ဟိုကပိုဆိုးလာလေဆိုတော့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အကြံပေးချက်အရ ရည်းစားကောင်လေးအတုထားဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ် အဲ့မှာသူ့ရည်းစားကောင်လေးဟန်ဆောင်ဖို့ ဆာရာဝပ်ဆိုတဲ့တကယ့်အဲ့ကျောင်းရဲ့ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်ကြီးကိုအကူအညီသွားတောင်းပါလေရော… အခြေတလိုင်းဆာရာဝပ်နဲ့ ပိန်းဥကတောင်အဖေပြန်ခေါ်ရလောက်တဲ့ ငပိန်းလေး တိုင်း တို့ဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်ကြမလဲဆိုတာ မိုးအေးအေးလေးနဲ့ Chillနိုင်ကြပါစေလို့…
Marn Bang Jai Marn Bang Jai ျမန္မာစာတန္းထိုး ====================== (15ပိုင္း) စ/ဆံုး ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေး ကတော့ .... ဖန်လဒါက Boarding School မှာ ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူလေး တစ်ယောက်ပါ .... သူ့ အဖေ ကတော့ နောက်မိန်းမ ဖြစ်သူ ဆွယ့် နဲ့ ဆွယ့် ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ ဆွန် တို့နဲ့ အတူ နေတာပေါ့ .... ထန်ဆိုတာကတော့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ပေါ့ .... ဝမ် လို့အမည်ရတဲ့ မိန်းမ ရှိပေမယ့် သူမဟာ ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်တာကြောင့် ထန် တစ်ယောက် သမီးလေး လုကော့နဲ့ အတူ တစ်မိုးအောက်မှာ နောက်အိမ်ထောင်မပြုပဲနေခဲ့ကြပါတယ် .... သို့ပေမယ့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဝမ် ဆုံးသွားတာကို အကြောင်းပြပြီး ၊ သူငယ်ချင်းသမီးလေးကို အကြောင်းပြပြီး ထန့်ကို ဝင်လုံးချင်တဲ့ မွန်ထရီ .... တစ်နေ့တော့ ဖန်လဒါအဖေက သူ့သမီး အားကစားပြိုင်ပွဲ လာတဲ့နေ့မှာ လမ်းလျှောက်ရင်း ဖုန်းပြောလာခဲ့ပါတယ် .... တစ်ဘက်မှာလည်း သမီးလေးလုကော့ အကလေ့ကျင့်ရေးပွဲရှိလို့ ကားကို အလောတကြီး မောင်းချလာတဲ့ ...
Shadow of Love အမြဲတမ်းကြည့်နေကြ ဇာတ်လမ်းရိုးရိုးကြီးတွေ ကြည့်ရတာ ပျင်းနေကြပီလား အတျဲလေးတို့ အာ့ဆိုရင်တော့ ဒီ "ပျယ်လွင့်သွားသောအရိပ်" ကားလေးကိုသာ ကြည့်လိုက်ပါ လို့ အကြံပေးပါရ‌စေ ဇာတ်လမ်း က တခါတိုင်း ကြည့်နေကြတွေနဲ့ လုံးဝ မတူပဲ ကွဲထွက်နေတဲ့ အသစ် စက်စက် လေးပါ .... ဒီကားလေးဟာ Ch3 ပထမနှစ်ဝက်မှာ ပြသခဲ့တဲ့ ကားတွေထဲမှာ Popular အဖြစ်ဆုံး (၃)ကားထဲက တစ်ကားအပါအဝင် ပါ
My Husband in Law Unicode] တိတ်တခိုးချစ်ရသူ ခင်ပွန်း ‘ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ‘ မေဟာ ငယ်ငယ်တည်းက မေ့အမေအရင်းဖြစ်သူ ဆုံးပါးသွားခဲ့လို့ အမေ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဂျီရဲ့ မွေးစားသမီးအဖြစ်နဲ့ နေထိုင်ခဲ့ရတယ် ၊ မွေးစားအမေရဲ့ သားအရင်းဖြစ်သူ ထင်ကိုမှ သဘောကျမိခဲ့ပြီး ဘာပဲဖြစ်လာလာ အနစ်နာခံ ချစ်ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ် ၊ ထင်ကတော့ ညီမလေးတစ်ယောက်ထက်မပိုခဲ့ပဲ အမြဲစနောက်အနိုင်ကျင့်နေခဲ့တယ်… တစ်ရက်…ထင်က အာဏာရှိ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ မိန်းမဖြစ်သူယာဒါနဲ့ သွားပတ်သတ်မိခဲ့ပြီး ဒီပတ်သတ်မှုကို ရပ်တန့်ဖို့အတွက် မေနဲ့ လက်ထပ်ဖို့ ဖိအားပေးခံခဲ့ရပါတယ် ၊ ဘယ်လိုမှမဖြစ်တဲ့အဆုံး ထင်က လက်ထပ်မှုဟာ အတုယောင်သာဖြစ်ကြောင်း အားလုံးပြီးရင် ကွာရှင်းဖို့ မေနဲ့ နှစ်ဦး တိုင်ပင်ပြီး အယောင်ဆောင် လက်ထပ်ခဲ့ပါတော့တယ် ။ သူတို့ လက်ထပ်မှုကြား ယာဒါက ပြန်လည်နှောင့်ယှက်လာချိန်မှာတော့ ဘာတွေဖြစ်လာဦးမလဲ… ထင်ကတော့ သူ့အပေါ်အနစ်နာခံပေးတဲ့ မေကို တကယ်ချစ်လာမှာလား…. ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ အချစ်ဟာသဆန်ဆန်လေးဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်ရိုက်ကူးသွားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ အင်းလေး ပုဂံ ရွှေတိဂုံစတဲ့ နေရာတွေမှာ ရိုက်ကူးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရှုခင်းအလှတွေကို ...
Pretty Little Liars Pretty Little Liars 2020 (Indonesia Remake) ================================ မြန်မာစာတန်းထိုး ================ ကျွန်တော်တို့ ဆယ်ကျော်သက်ကာလက Family Box (For Tv)စက်မှာ အမြဲမပြတ်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ အမေရိကန်Series နှစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ Series တွေက Pretyy Little Liars ရယ် Ghost Whisperရယ်ပေါ့။ အခုတော့ Pretty Little Liar အင်ဒို ဗားရှင်းလေး ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ အရင် နှစ်တွေကထိုင်းကိုရိုက်စေချင်ပေမဲ့အခုထွက်လာတာကတော့အင်ဒိုဗားရှင်းလေးပေါ့။ ဒီ Indo version လေးက Viuရဲ့တင်ဆက်မှုနဲ့အတူပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ ပြီးတော့ အမေရိကန်ကရုပ်သံတွေရဲ့ဇာတ်လမ်းကို The World Of Married ပြီးရင်၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်း ဒုတိယမြောက်ရိုက်ကူးခွင့်ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်အညွှန်း ကဲ Pretty Little.Liars ကားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးအုပ်စုတစ်စုရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူအလီဆာ ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံး မှုဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာ ဟန်နာ အမ်မာ ဆာဘရီနာ အေရီယာတို့ဟာ A လို့ခေါ်တဲ့ လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ် လူတစ်ယောက်ဆီကနေပြီးတော့ Short Messages တွေရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ Message တွေက သူတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေလို့ A ကပြောပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့…ဘာတွေဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ...